Khuphela iMostBet app mobile
Uyikhuphela njani iMostBet kwisixhobo sakho se-Android okanye se-iOS
Khuphela Khuphela Ngena
Ubhejo oluninzi lwenziwa ngokukodwa kubathandi bokubheja. Enkosi kuyo, umsebenzisi uya kuba nako ukusebenzisana ngqo nombhuki igama elifanayo kwaye bafumane ngokusemthethweni lokuwina kwabo.
Lo bhuki ufumene iwonga lombutho ofanele ukuthenjwa ngabathengi bawo. Usebenze kwiimarike iminyaka engaphezu kwe-10, akayikubalekela irhafu kwaye unawo onke amaxwebhu ayimfuneko ukwenza imisebenzi efanelekileyo. I-Mostbet izimise njengombhuki othembekileyo. Unezinye zeemeko ezifanelekileyo kunye nee-coefficients zabasebenzisi.
Enkosi kwesi sicelo, umsebenzisi unokulawula iakhawunti yakhe ngalo naliphi na ixesha elifanelekileyo kunye nendawo, kunye nokubheja kwiMostbet. Ukwenza lula ulawulo, abaphuhlisi banikezele ngeyona ndlela ifanelekileyo kunye nelula. Enye yeenzuzo eziphambili zesicelo kukuba isebenza phantse kuzo zonke izixhobo ezisekelwe kwi-Android. Ukongeza, umxhasi weofisi yebhuki ulawula inkqubela phambili yomdlalo okanye omnye umcimbi apho enze ukubheja kwi-Intanethi ngesixhobo sakhe.
Lo bhuki wamkela ukubheja phantse kuyo yonke imidlalo, kunye neminye iminyhadala kunye nemisebenzi. Ungabheja apha ukusuka kwi-ruble ye-50, kwaye ubuncinci bemali yokurhoxiswa yi-ruble eyi-100 kuphela. Ukurhoxiswa kunye nokuzaliswa kwemali kufumaneka kwiinkqubo zokuhlawula ezifana neYandex.Money, WebMoney, Qiwi, Mastercard kunye namakhadi ebhanki eVisa.
Wonke umbhuki ozihloniphayo namhlanje kufuneka abe neseti yophuhliso lokubheja kweselula, kuba abangcakazi baya bekhetha le ndlela yokubheja. Ngokuqhelekileyo, uphuhliso olunjalo lubandakanya inguqulo yeselula yesayithi kunye nezicelo ezikhethekileyo ezikuvumela ukuba udlale ukubheja usebenzisa igajethi yakho. KwiMostbet kukho inguqulelo eyenziwe lula yesiza yeeselfowuni eziphathwayo ezinokusetyenziselwa ukudlala ngefowuni yakho. Ngaba iMostbet inaso isicelo - masithethe ngakumbi.
I-Mostbet yaseMalta inesicelo senkqubo yokusebenza ye-Android, enokuthi ikhutshelwe ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi esemthethweni yombhuki. Iqhosha lokukhuphela libekwe kwikona ephezulu ngasekhohlo kwaye iboniswa yi icon ehambelana nayo. Kufuphi, ngendlela, kukho iqhosha lokukhuphela iMostbet yesicelo seselfowuni ye-iOS.
Ukukhuphela usetyenziso lweMostbet oluphathwayo, yiya kwiwebhusayithi yobhuki kwisixhobo sakho kwaye uye kwiphepha lokukhuphela. Nje ukuba ifayile yokuhlohla ikhutshelwe, ungaqala ukufakela. Qinisekisa ukuba kwiisetingi zefowuni yakho ephathwayo ivumelekile ukukhuphela isoftwe hayi kwi-Play Market (kule nto kufuneka ujonge useto lwegajethi yakho).
Okuqukwe kule theyibhile zezinye zeMostBet iindlela zentlawulo yeselula Uninzi lweBet lunikezela kubadlali.
Iindlela zediphozithi MostBet
Visa €1 - Ngoko nangoko
MasterCard €1 - Ngoko nangoko
Ukugqithiselwa kocingo lweBhanki €1 - Ngoko nangoko
Ecopayz €1 - Ngoko nangoko
Umhlawuli €1 - Ngoko nangoko
Imali egqibeleleyo €1 - Ngoko nangoko
ePay.bg €1 - Ngoko nangoko
I-Jetton Wallet €1 - Ngoko nangoko
Sofort €1 - Ngoko nangoko
Bitcoin €1 - Ngoko nangoko
Litecoin €1 - Ngoko nangoko
I-Dogecoin €1 - Ngoko nangoko
Iindlela zokurhoxa MostBet
Visa €1.50 - Iintsuku ezisi-7
MasterCard €1.50 - Iintsuku ezisi-7
Ukugqithiselwa kocingo lweBhanki €1.50 - Imizuzu eli-15
Ecopayz €1.50 - Imizuzu eli-15
Umhlawuli €1.50 - Imizuzu eli-15
Imali egqibeleleyo €1.50 - Imizuzu eli-15
I-Jetton Wallet €1.50 - Imizuzu eli-15
Sefa €1.50 - Imizuzu eli-15
Paysafe Card €1.50 - Imizuzu eli-15
Bitcoin €1.50 - Imizuzu eli-15
Litecoin €1.50 - Imizuzu eli-15
I-Dogecoin €1.50 - Imizuzu eli-15
I-Mostbet yebhuki yamazwe ngamazwe ayinayo i-iPhone application, enokuthi ikhutshelwe kwiwebhusayithi esemthethweni yeofisi kwindawo ye-.com, ngoko abasebenzisi abanakukhuphela i-Mostbet kwigajethi.
Ifemu esemthethweni yaseRashiya i-Mostbet inesicelo se-iPhone, ngoko ke abasebenzisi abangabanini bezixhobo ezisekelwe kule nkqubo yokusebenza banokusebenzisa olu hlobo lophuhliso.
Isicelo sekhompyuter, nangona ukungasebenzi kwayo kwangaphandle, luphuhliso olulula kakhulu. Yenza imisebenzi ebalulekileyo njengokugcina itrafikhi, ukudlula ukubhloka kunye nokukwazi ukungena ngokukhawuleza kwiakhawunti yakho. Iinkampani ezininzi zokubheja zisungula olu hlobo lophuhliso kwaye iMostbet yenye yazo. Unokukhuphela uphuhliso kwiPC yakho ngokucofa iqhosha elihambelanayo kwikona ephezulu ngasekhohlo yesiza.
Umbhuki osemthethweni waseRussia akazange aqalise uphuhliso lwekhompyuter yakhe, ngenxa yoko, abadlali abanakukhuphela isicelo seMostbet simahla. Mhlawumbi, kungekudala ubhuki uya kuvuyisa abathengi bakhe ngolu hlobo lophuhliso (kwaye inkampani yaseRashiya iya kuqalisa izicelo zeselula ze-Android kunye ne-iPhone).
Njengesikhumbuzo, ngokomgaqo-nkqubo omtsha kaGoogle, i-Play Market ayisasazi isoftware yokungcakaza, ngoko ke akukho software yebhuki.
Ukubheja kwezemidlalo ngokupheleleyo kuyafumaneka kwiMostbet app. Abasebenzisi bangabhalisa, benze ukuthengiselana ngemali, benze iibheji, bathathe inxaxheba ekunyuseni ibhonasi , inkxaso yoqhagamshelwano.
Kuyinyaniso ukuba, ubhuki waseRashiya akanaso isicelo se-Android, ngoko awukwazi ukukhuphela iMostbet kwifowuni yakho kwiwebhusayithi esemthethweni. Kuhlala kuphela ukulinda umbhuki ukuba avuyise abathengi bakhe baseRashiya ngophuhliso lwedijithali.
Khuphela usetyenziso lweMostBet